Kulliyadda Farsamada ee Hennepin - Dugsiyada Aagga Robbinsdale
Dugsiyada Robbinsdale Area iyo Hennepin Technical College (HTC) ayaa ku dhawaaqay iskaashi cusub guga 2018, kaasoo ujeedkiisu yahay xoojinta wadiiqooyinka loo maro xirfadaha iyo waxbarashada farsamada. Wadashaqeynta iskaashiga ayaa sidoo kale ku dadaaleysa sidii loo xoojin lahaa isgaarsiinta ku saabsan u diyaarsanaanta shaqaalaha ardayda iyo qoysaska labada machadba.
Wadashaqeynta Kuliyada Farsamada ee Hennepin waxay la jaanqaadaysaa himilada degmadeena si aan u dhiiri galino waxna u baro dhamaan ardayda si ay u horumariyaan awoodooda gaarka ah isla markaana ay si togan wax ugu taraan bulshadooda. ” Carlton D. Jenkins, Ph.D.
Kormeeraha guud ee Dugsiyada Deegaanka Robbinsdale
U heellan waxbarashada farsamada
Iskaashigu waa mid ku habboon labada machad, maadaama labaduba ay ka go’an tahay barashada farsamada. "Marka la eego boqolkiiba 99 meelaynta shaqo ee ardayda qalin jabisay, Kuliyadda farsamada ee Hennepin waxay muujineysaa inaan abuurnay jawi waxbarasho oo ka jawaabaya baahida ardayda iyo warshadaha," Dr. Merrill Irving, Jr, madaxweynaha, Hennepin Technical College ayaa yiri. . Wadashaqeena aan la leenahay Robbinsdale Area Schools waxay ardayda siin doontaa fursado ay ku bartaan xirfadaha baahida loo qabo si ay u helaan shaqooyin mushahar badan qaata. ”
Ka go'naanshaha sinnaanta iyo ka mid noqoshada
Labada hay'adoodba sidoo kale waxaa ka go'an inay horumariyaan sinnaanta iyo ka mid noqoshada. Dugsiyada Robbinsdale Area waxay leeyihiin arday kaladuwan, oo kuhadasha 86 luqadood oo kaladuwan oo guriga ah, iyo sidoo kale taariikh hodan ah oo kaqeybgalida dadyow kaladuwan muraayadaha cadaalada. Bishii Luulyo 2018, Guddiga Dugsiga wuxuu qaatay siyaasad sinnaan, oo si cad u qeexaya ballanqaadkeeda "si loo hubiyo marin u helidda iyo fursadda DHAMMAAN ardayda, iyadoo la tirtirayo farqiga u dhexeeya waxqabadka ku saleysan jinsiyadda, xaaladda dhaqan-dhaqaale, iyo luqadeed."
HTC waxay leedahay arday kaladuwan oo kaladuwan oo leh 63% ardayda ka imanaya dad aan badnayn. Kuleejku wuxuu kujiray 29th qaran ahaan bixinta shahaadooyinka Associate ee haweenka iyo dadka laga tirada badan yahay ee Teknolojiyada injineernimada iyo injineernimada sida lagu soo sheegay daabacaadii Diseembar 2018 ee Arimaha Kala Duwan ee Tacliinta Sare.